Tag: ọ dịghị onye na-eche
Ọ dịghị onye na-eche Banyere Blog Gị!
Wenezdee, Machị 14, 2007 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Kwa ụbọchị, m na-enwetara ma ọ dịkarịa ala otu ribbing banyere blog m. Anaghị m ewe iwe. M na-eche na onwe m, “ọ bụ a blogger ihe, ị ga-aghọta”. Eziokwu bụ na enwere m nkwanye ùgwù dị ukwuu maka ndị na-ede blọgụ karịa ka m na-eme ndị na-abụghị ndị na-ede blọgụ. (Biko rịba ama na m kwuru nkwanye ùgwù 'ka ukwuu'. Ekwughị m na enweghị m nkwanye ùgwù maka ndị na-abụghị ndị na-ede blọgụ.) E nwere ọtụtụ ihe kpatara: Ndị na-ede blọgụ na-ekerịta ihe ọmụma n'efu. Ndị na-ede blọgụ na-ama echiche dị iche iche aka. Ndị na-ede blọgụ na-achọ ihe ọmụma.